Biennale de Venise : Manomana fatratra i Joël Andrianomearisoa -
AccueilVaovao SamihafaBiennale de Venise : Manomana fatratra i Joël Andrianomearisoa
Biennale de Venise : Manomana fatratra i Joël Andrianomearisoa
05/01/2019 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Lehibe indrindra amin’ireo fampirantiana amin’ny kanto ankehitriny. Sambany handray anjara amin’ny « Biennale de Venise » i Madagasikara, ary efa manomana fatratra izany i Joël Andrianomearisoa, any Frantsa amin’izao fotoana. Ny 1 mey ka hatramin’ny 24 novambra ho avy izao no hanatanterahana ny hetsika, ary efa seriny amin’ny fanomanana izay kanto hatolony amin’ireo hetsika iraisam-pirenena io ny mpanakanto. « Mbola misy ireo pitsopitsony ara-teknika mila hamarinina sy tsy maintsy hanaovana fanandramana mialohan’ny handefasana ny asa any Venise. Tsy misy ny andrakandrana any fa toa ireny miatrika fifaninanana iraisampirenena toa ny fiadiana ny amboara eran-tany, na lalao olimpika no atao », araka ny fanazavan’ny talen’ny fikambanana Kantoko, izay niady mafy niaraka tamin’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny asa Tanana, ary ny fiarovana ny vakoka ny handraisan’i Madagasikara amin’ity andiany faha-58 ity.
Araka ny efa nahafantarana azy hatramin’izay, ny hairaha araka endrika amam-bika no tena manavanana an’i Joël Andrianomearisoa, ary entiny mandritra ity hetsika ity. Tsiahivina fa anisan’ireo kanto ankehitriny ny hairaha araka endrika amam-bika manampy ny sary sokitra, ny hosodoko, ny taotrano, ny asa tanana… Tafiditra ao anatin’izany koa anefa ireo seho an-tsehatra toa ny dihy, ny tantara an-tsehatra, ny fanehoana hakingana…
Teraka tamin’ny taona 1977, Joël Andrianomearisoa, ary miaina sy miasa eto Antananarivo ary any Paris. Maro ireo fampirantiana izay notanterahiny teo anivon’ireo toerana lehibe iraisam-pirenena mikasika ny zava-kanto. Ohatra amin’izany ny Maxxi ao Rome, ny Hamburger Bahnof ao Berlin, ny Smithsonian ao Washington, ary ny Centre Pompidou ao Paris. Efa nahazo ny loka Arco Madrid Audemars Piguet 2016 izy. Misy toerana fanaovana varotra fampirantiana no miara-miasa akaiky aminy toa an’i « Sabrina Amran » any Madrid, « Primo Marella » any Milan ary ny « RX » any Paris.